လူမှုကျင့်ဝတ် နှင့် လူ့တန်ဖိုး
လူမှု၀န်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ်လိုက်နာသော နိုင်ငံ့သားကောင်းများ မွေးထုတ်ရေးတို့သည် တန်ဖိုးရှိသည့်လူ့အသိုက်အဝန်းအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဟုဆိုရပါမည်။ လူမှုကျင့်ဝတ်လိုက်နာခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ် အပါအဝင် မည်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းဖြစ်စေ လူမှုကျင့်ဝတ်ကို လေးစားလိုက်နာသော၊ တာဝန်ယူတတ်သော၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု ရှိသော လူတစ်ဦးချင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ လူအသိုက်အဝန်းအတွင်း ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်စေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခလွန်လူ့အသိုက်အဝန်းတွင် သဟဇာတဖြစ်သည့်လူမှုဝန်းကျင်ဖြစ်ရန်မှာ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းကျောင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာလူမှုကျင့်ဝတ်များကို ကိုယ်စီကိုယ်စီက လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့်လည်း တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ဝန်းကျင်တွင် လူ့ကျင့်ဝတ်များအားနည်းလာပြီး ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်လာခြင်းသည် ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအတွက်လည်းကောင်း၊ အနာဂတ်အကျိုးအတွက် လည်းကောင်း အဟန့်အတားများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုပါက ကျင့်ဝတ်လိုက်နာစောင့်ထိန်းသည့် နိုင်ငံသားများဖြစ်ရေးနှင့် ဝန်းကျင်ကောင်းများ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ကြရန်မှာ အရေးကြီးလိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ဟုဆိုရမည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် လူမှုကျင့်ဝတ်အားနည်းသူများ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားထိပ်တန်းတင်သူများ၊ တစ်ဖက်သားကိုနင်း၍ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှာလိုသူများ၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုများ၊ ရန်ဘက်အသွင်အုပ်စုဖွဲ့မှု များကဲ့သို့သော အတ္တဗဟိုပြုတတ်သူများဆိုသည်မှာ လူ့အသိုက်အဝန်းတိုင်းတွင် ရှိတတ်ကြစမြဲဖြစ်၏။ ထိုသို့ရှိနေခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခလွန်လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် မလိုလားအပ်သည့် အကျင့်စရိုက်များဟုဆိုရပါမည်။ လူ့ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာသော၊ မလိုက်နာသော တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အသိုက်အဝန်းများဖြစ်လာစေသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ လူမှုကျင့်ဝတ်များအားနည်း လာသည်နှင့်အမျှ ကာယကံရှင်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ အသိုက်အဝန်းအတွက်ဖြစ်စေ ကောင်းမွန်သည့်လက္ခဏာမဟုတ်သည်မှာ သေချာပါ၏။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မတည်မငြိမ်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားသောအပြုအမူနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားလုံး၏စုစုပေါင်း။
တစ်ဦးချင်း Unique ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့် အားလုံးအမူအကျင့်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏ပေါင်းလဒ် စုစုပေါင်း။
လူမှုကျင့်ဝတ်များလိုက်နာခြင်း၊ မလိုက်နာခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သာမက တစ်ဦးချင်း၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး personality နှင့်လည်း တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ Personality အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် Personality,acharacteristic way of thinking, feeling, and behaving. Personality embraces moods, attitudes, and opinions and is most clearly expressed in interactions with other people. ဟုဆိုပါသည်။ မိမိ၏ personality အရ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ လူမှု့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာနိုင်မှုလည်း တူညီနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ မည်သို့ဆိုစေ လူမှု့ကျင့်ဝတ် ဆိုသည်မှာ မပြောင်းလဲနိုင်သည့် အကျင့်စရိုက်တစ်ခုကတော့မဟုတ်။ ကိုယ်ကျင့် သီလနှင့်ဉာဏ်ပညာရှိသူသည် ကောင်းမြတ်သူ ဖြစ်ပေသည်။ လက်တစ်ဖက်ကို အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆေးကြောရသကဲ့သို့၊ ခြေ တစ်ဖက်ဖြင့် အခြားခြေတစ်ဖက် ဆေးကြောရသကဲ့သို့ ပညာကို သီလ ဖြင့်ဆေးကြာရသည်၊ သီလကို ပညာဖြင့် ဆေးကြောရသည်။ ကိုယ်ကျင့် သီလနှင့် ဉာဏ်ပညာ အပြန်အလှန်ဆေးကြောတတ်သူသည် ကောင်းမြတ်သူဖြစ်ပေသည်ဟု ဒီဃနိကာယ် သောဏဒဏ္ဍသုတ္တန်တရားတွင် တွေ့ရပါသည်။
လူမှု့ကျင့်ဝတ်ဆိုရာတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ အသိုက်အဝန်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ကွဲပြား ခြားနားမှုများရှိနေနိုင်သော်လည်း လူပီသအောင်နေထိုင်ခြင်း (Humanity)သည် လူသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကျင့်ဝတ်ဟုဆိုရပါမည်။ မည်သူမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း နေထိုင်ကျင်လည်၍မရနိုင်ခြင်းကြောင့် အများနှင့် ရောနှောနေထိုင် ဆက်ဆံကြရာတွင် လူပီသအောင်ကျင့်ကြံနေထိုင်ရေးသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လူပီသစွာ နေထိုင်ခြင်းသည် အခြားသူများအပေါ်လေးစားခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်း တစ်ဦးချင်းတွင် လူပီသအောင်နေထိုင်ခြင်း (Humanity) ထားရှိကြမည်ဆိုက ပဋိပက္ခလွန်လူ့အသိုက်အဝန်းအတွင်း သဟဇာတ ဖြစ်မှုနှင့် အေးချမ်းမှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထို့အတူ သက်ဆိုင်ရာမိမိတို့ကျင်လည်ရာအသိုက်အဝန်းအလိုက် လိုက်နာစောင့်ထိန်းအပ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားများသည် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းကျင့်ဝတ်အရဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရဖြစ်စေ အသီးသီးရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ဘာသာရေးအဆုံးအမများ ခိုင်မာစွာရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ဦးချင်းဆက်ဆံရေးမှအစ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကျင့်ဝတ်လိုက်နာနိုင်မှု အခြေအနေကျဆင်းလာသည့်အခါ ယင်းအသိုက်အဝန်း၏ လူမှုအဆင့်အတန်းနှင့် တန်ဖိုးသည်လည်း ကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာအသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် လူမှုကျင့်ဝတ်သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကဏ္ဍတွင် မြင့်မားလာနေသည့် ဆင်ခြင်တုံတရား၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ သာတူညီမျှမှု၊ ဗဟုဝါဒ၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ လူသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်ဆံကြရာမှတစ်ဆင့် လူမှုကျင့်ဝတ်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာတွင် လူထုကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူမှုကျင့်ဝတ်၊ လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များသည် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်လျက်ရှိကြရာ လူမှုကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းလိုက်နာမှု့ အားနည်းခြင်းများကြောင့် မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
လူ၏သဘာဝသည် အကျင့်မှစရိုက်သို့ ပြောင်းလဲတတ်သည်ဖြစ်ရာ အဖန်ဖန်ဖြစ်တည်နေသည့် လူ့အသိုက်အဝန်းအတွင်း လူမှု့ကျင့်ဝတ် များအားနည်းလာသည့် အကျင့်များမှသည် စရိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲ နိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုစရာပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာနန္ဒသိန်းဇံ၏ ကိုယ်ကျင့်တည်ကြည်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်စာအုပ်တွင် တစ်ခုသည် အခါများစွာ၊ အကြိမ်အရေအတွက်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် (ဝါ) အပြုအမူတစ်ခုကို အခါများစွာ၊ အကြိမ်အရေအတွက်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထိုအပြုအမူသည် အကျင့်စရိုက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရောက်ရှိသွား၏။ ထိုသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းသည် အရေအတွက်မှ အရည်အချင်းသို့ပြောင်းလဲသည့် ဥပဒေသကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏ဟုဆိုထားပါသည်။ အကျင့်မှစရိုက်သို့ မကူးပြောင်းမီ အချိန်မီ ဝိုင်းဝန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြရန်လည်း အရေးကြီးလှပါသည်။
အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအနေနှင့် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရောဆိုသည့် လူတန်းစားများကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်ဆိုသည်မှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ စိတ်သန္တာန်တွင် လူမှုကျင့်ဝတ်ကို လေးစားလိုက်နာစိတ်များရှိနေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျိုးအတ္တကို ဦးထိပ်ထားသူများ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်မလိုက်နာသူများကိုလည်း လူမှု့ဝန်းကျင်တစ်ရပ်လုံးမှလက်မခံဘဲ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်းကြမှသာ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ဒီမိုကရေစီသဘောတရားများနှင့် ကင်းကွာနေသော မိမိတို့ လူမှုဝန်းကျင်တွင် ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များနှင့် ညီသော ဝန်းကျင်ကောင်းများတည်ဆောက်ရန်ဆိုပါက ကျောင်းများတွင် ပညာရှာမှီးရေးအတွက်သာမက မိမိတို့ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်၌ လူမှု့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာ စောင့်ထိန်းသောသူများဖြစ်ရေး ဝိုင်းဝန်းထိန်း ကျောင်းကြရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါသည် ပညာတတ်ရေးကိုသာ အဓိကထားသင်ကြားနေကြရပြီး နိုင်ငံသားကျင့်ဝတ်၊ လူမှုကျင့်ဝတ်တို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းနိုင်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆရာဝန်သည် လူမှုကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း လိုက်နာကြရပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားသည် နိုင်ငံရေးသမား ကျင့်ဝတ်လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးတွင်လည်း လိုက်နာကြရမည့် ကျင့်ဝတ်များရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကျောင်းများတွင် လူမှုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကို လက်တွေ့လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်ထက် စာသဘောသိရှိစေရေးနှင့် အလွတ်ကျက်မှတ်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးနေမည်ဆိုပါက အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်နှင့် ရလဒ်လွဲချော်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံ၊ ကန်တာဘရီယာတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲအကြောင်း နမူနာဖော်ပြလိုပါသည်။ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲဝင် သြဂတ်စတင်း နာဗာရိုသည် ပန်းဝင်ခါနီး အဆင့် ၄ သို့ရောက်နေချိန် ၎င်း၏ရှေ့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ပြိုင်ဘက်၏ဘီးပေါက်သွားပါသည်။ ဘီးပေါက်သွားသည့် စက်ဘီးသမား အစ္စမဲလ်အက်စ်တီဘန်သည် သူ့စက်ဘီးကို ပခုံးထမ်း၍ ပန်းတိုင်ကို အပြေးသွားနေချိန်တွင် နာဗာရိုသည် အက်စ်တီဘန်ကိုကျော်မတက်ဘဲ သူ၏အရှိန်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီး စတုတ္ထနေရာမှသာ ပန်းဝင်ခဲ့သည်။ အက်စ်တီဘန်ကလည်း တတိယဆုယူဖို့ကို ငြင်းဆန်သွားခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် နာဗာရိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ အနိုင်မလိုချင်ပါဘူး၊ သူ့ကို ပန်းမဝင်ခင် ကျော်တက်လိုက်ရမှာဟာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ရာ ရောက်ပါတယ် ဟုပြောကြားခဲ့ရာ လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့် လူတစ်ဦး၏တန်ဖိုး ဆက်နွယ်မှုကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာမှုနယ်ပယ်တွင် လူမှုကျင့်ဝတ်အကြောင်းဆိုလာပါက ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရရေးသားခဲ့သည့် ဟုတ်သောအကြံ၊ မှန်သောအကျင့်၊ သင့်သောအယူ၊ ဖြူသောနှလုံး၊ သူတော်ထုံးကို၊ စွဲသုံးသော ထွေမှန်လှစေဆိုသည့် ဆုံးမစာသည်ထင်ရှားလှပါ၏။ ထိုထိုသော ဆုံးမ စာများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ မည်မျှပင်ရှိစေကာမူ လက်တွေ့ အမှန်တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးကြမှသာ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသောသူများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တန်ဖိုးရှိသောသူတစ်ဦးချင်းမှသည် တန်ဖိုးရှိသော အသိုက်အဝန်းကို မျှော်မှန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
(၁၅. ၃. ၂၀၂၀)